मस्तिष्कघात कस्तो किसिमको स्वास्थ्य समस्या हो ? – Suchana Hub
मस्तिष्कघात कस्तो किसिमको स्वास्थ्य समस्या हो ?
काठमाण्डौ । मस्तिष्कघातलाई ब्रेन अट्याक पनि भन्ने गरिन्छ । मुटुको नसा बन्द भएर आउने समस्यालाई हर्ट अट्याक भनेझैँ दिमागको सानो वा ठूलो नसा बन्द हुँदा आउने समस्यालाई मस्तिष्कघात भनिन्छ । यसलाई मेडिकल इमर्जेन्सी पनि भनिन्छ ।
यदी बिरामीमा एक्कासि ब्यालेन्स बिग्रियो, उभिँदाखेरी उभिन सकेन लर्बरियो भने त्यस अवस्थालाई मस्तिष्कघातको लक्षणको रूपमा बुझिन्छ । अर्को ई भएको आई अर्थात आँखा । एउटा वा दुइटै आँखाले एक्कासि रूपमा देख्न नसक्नु वा आँखाले हेर्दा धमिलो देखिनु । एक्कासि यस्तो भयो भने यो पनि मस्तिष्कघातको लक्षण हो । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
त्यस्तै एउटा वा दुइटै आँखाले एक्कासि रूपमा देख्न नसक्नु तथा आँखाले हेर्दा धमिलो देखिनु पनि मस्तिष्कघातको लक्षण हो । प्राय उमेर बढ्दै गएको मानिसमा मस्तिष्कघात भेटिन्छ । त्यस्तै धेरै गुलियो, चिल्लो , रक्सी, चुरोट सेवन गर्नेहरुमा र मुटु रोगीहरूमा पनि पनि मस्तिष्कघात भेटिन्छ ।
Previous होम आइसोलेशनमा बस्ने कोरोना संक्रमितलाई टोखा नगरपालिकाले हरेक दिन ३५० रूपैयाँ दिने
Next एकैदिनमा थपिए यति धेरै संक्रमित, १२ जनाको मृत्यु